Jul 3, 20202min
နောက်ထပ် သွားရည်ယိုစရာ ကုန်ပေါက်လေး တစ်ခုလောက် Review တင်ချင်ပါတယ်။ Keychron K2 ဆိုတဲ့ Mechanical Keyboard လေးပါ။ ဒီ Review ကို ရေးချင်လို့ Mechanical Keyboard အကြောင်းကို သီးသန့် မှတ်စုတစ်ခု အရင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်က Link မှာ ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Mechanical Keyboard ဆိုတာကို မကြားဖူးခင် ဟိုးအရင် ကတည်းက ကီးဘုတ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံး လိုချင်တယ်၊ ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက ရှိပြီးသား။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီရက်ပိုင်းမှ Twitter မှာ ကိုယ် Follow လုပ်ထားတဲ့ Developer တွေက သူတို့ ကိုယ်တိုင်ဆင်ထားတဲ့ Keyboard တွေကို ပုံတွေတင်လိုက်၊ Video တွေတင်လိုက်နဲ့ ကြွားကြွားနေကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ Keyboard တွေအကြောင်း လေ့လာကြည့်တော့ Mechanical Keyboard ဆိုတာကို ကြားဖူးသွားတယ်။ အဲ့မှာ ရောဂါကစတာပဲ။ ထုံးစံအတိုင်း သိတာများလာတော့ လိုချင်တာလည်း များလာတယ်လေ။
Google မှာ Mechanical Keyboard လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ရင် အများဆုံးတွေ့ရတာက Gaming Mechanical Keyboard တွေပဲဗျ။ ကိုယ်ကလည်း အဲ့လိုကြောင်ကြောင်ကြားကြားနဲ့ ဂိမ်းရုပ်ပေါက်တဲ့ Keyboard တွေကို နဂိုကတည်းက မကြိုက်။ တံဆိပ်တွေကလည်း ကိုယ်ရင်းနှီးတဲ့ တံဆိပ်မျိုးတွေ မဟုတ်တော့ ဘယ်ဟာကောင်းမှန်းလည်း မသိ။ Review တွေလည်းကြည့်ရင်း ဝယ်မယ်ဆိုပြီး နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင် ရွေးတော့ WASD ရယ်၊ Durgod ရယ်၊ Keychron ရယ်ကို ယှဉ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။
တကယ်လိုချင်ခဲ့တာက WASD code keyboard။ သူက Key Cap တွေ၊ စာလုံးတွေ၊ အရောင်တွေ၊ Size တွေ၊ Switch တွေ အကုန်လုံးကို စိတ်ကြိုက်ဆင်ပြီး မှာလို့ရတယ်။ ပိုင်ရှင်ကလည်း Developer စစ်စစ်၊ Stackoverflow ရဲ့ Co-Founder ဆိုတော့ Impression ကကောင်းတယ်လေ။ Durgod Keyboard ကကျတော့ ဈေးသက်သာပြီး Design ရှင်းတဲ့ Tenkeyless မို့လို့ လိုချင်တာ။ Keyboard Reviewer တစ်ယောက်ကလည်း Durgod k320 ကို တော်တော်လေးညွှန်းထားလို့။
မှတ်စုတို Chat Group ထဲမှာ Keyboard အကြောင်းပြောဖြစ်တော့ Arkar ကလည်း Keychron ဝယ်ပါ၊ Keychron ကောင်းတယ်ချည်းပဲ ညွှန်းနေတာကတစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ (ရန်ကုန်မှာ) လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတာက တစ်ကြောင်းဆိုတော့ နောက်ဆုံး Keychron ပဲ ရွေးဖြစ်သွားတယ်။ တခြားဆိုင်တွေမှာရောင်းတယ်လို့တော့ တစ်ခါမှ မကြားမိဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ IT Industry by Win Mobile World မှာ သွားဝယ်လိုက်တယ်။
IT Industry by Win Mobile World
IT Industry by Win Mobile World. 16,829 likes · 2,867 talking about this · 51 were here. Computer store operated by Win Mobile World. All kinds of laptops and customized desktops are available.
ပထမတစ်ရက်မှာ မဝယ်ဘဲနဲ့ ဆိုင်မှာ ရှိသမျှ Mechanical Keyboard တွေ အကုန်လျှောက်နှိပ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ အဲ့မှာ သတိထားမိတာ ကီးဘုတ်တွေက ဘယ်လောက်ပဲ Review တွေကြည့်ထားထား ကိုယ်တိုင်နှိပ်ကြည့်မှပဲ ကိုယ့်လက်နဲ့ အံဝင်တာကို သိရတယ်။ ဒါတောင် စမ်းနှိပ်တာနဲ့ တကယ်အလုပ်လုပ်တာနဲ့ နည်းနည်း ကွာသေးတယ်။ ပြီးတော့ အသံက ကိုယ်ထင်ထားသလို Switch ကြောင့်မြည်တဲ့အသံ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ Switch မှာက Clicky Tactile Switch တစ်မျိုးပဲ အသံမြည်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့် ကီးဘုတ်မှာက Key Cap က ကီးဘုတ်ရဲ့အောက်ခံကို ထိမိတဲ့အသံ (သို့) Key Cap က Switch ကို ထိမိတဲ့အသံပါမြည်တယ်။ ဒါကြောင့် Keyboard မဝယ်ခင် Switch Tester တွေနဲ့ ဝယ်ပြီးစမ်းလည်း တကယ်ကီးဘုတ်ရဲ့ အသံနဲ့တော့ မတူနိုင်လောက်ဘူး။
Keychron က Gateron Switch Blue, Brown နဲ့ Red သုံးမျိုးနဲ့ လာတယ်။ Backlit ကလည်း RGB အရောင်ရယ် တစ်ရောင်တည်းရယ်ဆိုပြီး ရွေးလို့ရတယ်။ IT Industry မှာက RGB ပဲရှိတော့ RGB Blue Switch ကိုပဲ ယူလိုက်တယ်။ Body မှာလည်း Aluminium နဲ့ Plastic နှစ်မျိုးလာတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ Keyboard က စာရိုက်ဖို့ပဲ။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းသုံးဖို့မရှိတော့ Aluminium Body မလိုဘူးထင်တာပဲ။ အမြင်မှာလည်း ဘာမှ မကွာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်မှာက Blue Switch အတွက် Plastic Body မရှိဘူးဆိုတော့ ၃ သောင်းပိုပေးပြီး Aluminium Body ပဲ ယူခဲ့ရတယ်။
Source : Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=tHZxeR0uXQE)
ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ Keychron K2 ကို တော်တော်လေး ကြိုက်တယ်ပြောရမယ်။ Keycap တွေရဲ့ အရောင် အတွဲအစပ်က ကြောင်ကြောင်ကြားကြားတွေမဟုတ်ဘဲ တော်တော်လေးငြိမ်တယ်။ Key Cap တွေပေါ်က စာလုံး Font တွေကလည်း တော်တော်လေး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိတယ်။ Semi-minimalist လို့ ပြောရမယ်။
Mac OS, Windows OS ကို ပြောင်းဖို့အတွက် Physical Switch တစ်ခုပါတာက တော်တော်လေး အဆင်ပြေတယ်။ သိသလောက် Mechanical Keyboard တွေမှာ အဲ့လို Physical Switch ပါတာ တော်တော်လေးရှားတယ်။ Key Remap ပြန်လုပ်ရတယ်။ ကိုယ်လို ရုံးချိန်မှာ ရုံးကွန်ပျူတာသုံးပြီး ရုံးကပြန်တာနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ ကိုယ်ပြန်ကိုင်တတ်တဲ့သူမျိုးအတွက်တတော့ တော်တော်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ခလုတ်လေး ရွှေ့လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ Key Remap လုပ်တာထက် အများကြီး ပိုမြန်တယ်လေ။
Bluetooth က Device ၃ ခုကို ချိတ်ထားလို့ရတယ်။ ရုံးကွန်ပျူတာနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာနဲ့ ၂ ခုလုံးသုံးနေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ မဟုတ်ရင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ချိတ်ဖို့ တခြား တစ်လုံးကနေ ပြန်ဖြုတ်ပေးရ၊ နောက်တစ်လုံးမှာ ပြန်ချိတ်ရနဲ့ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်တယ်။ နောက်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ဂိမ်းမဆော့ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတော့ ဂိမ်းဆော့ရင် Lag လား၊ မ Lag လားမသိဘူး။ ဂိမ်းမဟုတ်တဲ့ တခြား App တွေမှာတော့ Lag တာ နှေးတာ၊ နောက်ကျတာ လုံးဝမရှိဘူး။
သူ့ရဲ့ Official Website မှာတော့ 72 နာရီဆက်တိုက် စာရိုက်နေလို့ရတယ်လို့ ပြောထားတယ်။ စမ်းတော့ မစမ်းကြည့်ဖူးဘူး။ Backlit ကို အလင်းဆုံးတင်ပြီး တစ်ရက် ၁၀ နာရီနဲ့ ၄ ရက်လောက်တော့ အားမသွင်းဘဲ သုံးဖူးတယ်။ လုံးဝအေးဆေးပဲ။
အသိသာဆုံး အားနည်းချက်ကတော့ Hot Swap မဟုတ်တာပါပဲ။ Hot Swap မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ် Blue Switch နဲ့ ဝယ်ထားမိရင် မပျက်မချင်း Blue Switch နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားရလိမ့်မယ်။ စိတ်ကြိုက် Switch ပြန်လဲလို့ မရတော့ဘူး။
နောက်တစ်ခုက အရမ်းထူတာ။ ကိုယ့်လို ကိုးရို့ကားယား ရိုက်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ရင် Wist Rest ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်အောက်မှာ ခုစရာတစ်ခုခုခံထားမှ ရိုက်ရတာ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ Wireless Mechanical Keyboard ကိုပဲ သူ့လောက်မထူတာတွေ တော်တော်များများတွေ့ဖူးပါတယ်။ K2 ကတော့ တော်တော်လေးကိုထူတယ်။
Keyboard ရဲ့ Backlit အရောင်တို့၊ Pattern တို့ကိုပြောင်းတဲ့ ခလုတ်က ညာဘက်အပေါ်ထောင့် Delete Key ရှိသင့်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်နေတယ်။ Delete Key က အတွင်းဘက်ရောက်နေတော့ Delete ကို နှိပ်တိုင်း အဲ့ဒီ မီးခလုတ်ကိုပဲ သွားသွားနှိပ်မိနေတယ်။
Keyboard မဝယ်ခင်ကတော့ Review တွေ အများကြီးကြည့်ပြီး ဟိုဟာလည်းပါချင်၊ ဒီဟာလည်းပါချင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ မေ့သွားတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်။ Key Remap ပါ။ Keychron မှာ Key Remap လုပ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင် Application မရှိသလို QMK Configurator လိုမျိုး Third-Party App တွေကလည်း Keychron ကို Support မလုပ်ပါဘူး။ Key Remap အစား OS ပြောင်းလို့ရတဲ့ Physical Switch တစ်ခု ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ခြုံငုံပြီးပြောရရင်တော့ Advance User မဟုတ်ရင် တော်တော်လေး သုံးပျော်တဲ့ Keyboard ပါပဲ။ ဒီ Keyboard ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လခွဲလောက်ကတည်းက ဝယ်ထားတာ။ ဝယ်ပြီးကတည်းက နေ့တိုင်း သုံးတာပဲ။ သုံးရတာ တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာတယ်။ ပေးရတာ တန်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဝယ်ရတာလည်း လွယ်လို့ထင်တယ် မြန်မာနိုင်ငံက Developer တော်တော်များများလည်း Keychron K2 သုံးကြတာတွေ့မိတယ်။ ဒါကြောင့် Advance User မဟုတ်ဘူးဆိုရင် Keychron K2 ကို ဝယ်သင့်တယ်လို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
Cover Photo : Keychron